गणतन्त्रको जग : माघ १९- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
सरकारको बिग्रँदो स्वास्थ्य
माघ १३, २०७५ किशोर नेपाल
काठमाडौँ — २०३१ तिर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला राजनीतिक निर्वासनमा भारतको बनारस सहरमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त्यहाँबाट नेपालमा चलेको राजाको सक्रिय शासन र निर्विकल्प भनिएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आगो ओकल्दै हुनुहुन्थ्यो ।
त्यही समयमा नेपाली गायकहरूको समूह ‘राल्फा’ पूर्वी नेपालको भोजपुरमा रहेको एउटा स्कुलको आँगनबाट गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीका नेपालीलाई उठाउन खोज्दै थियो : गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ ।यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ । गीत सुन्दर थियो । शब्दावली मौलिक । मानिसको अन्तस्करणलाई छुने संगीत ।
राजा वीरेन्द्र सत्ताको शीर्षमा थिए । उनको आदेशको उल्लंघन गर्ने साहस कसैमा थिएन । उनले चाहेको भए राजनीतिक परिवर्तन त्यही समय सुरु हुन्थ्यो । राजा वीरेन्द्रले त्यो साहस गरेनन् । राजा भएकाले उनी अलिकति अनुदारवादी थिए । देखाउनैका लागि अलिकति हलुका उदारवादी छवि ओढेका थिए । यो छविको महिमा गाउने मानिसको अहिलेसम्म कमी देखिएको छैन काठमाडौंमा । उनको पुण्यप्रतापमा हुर्किनेहरूको पनि कमी छैन । उनले सन् २००० सम्म नेपाललाई एसियाली मापदण्ड पूरा भएको देशका रूपमा प्रस्तुत गर्ने धोको राखेका थिए ।
बीपीले २०३३ सालमा हिंसात्मक आन्दोलन परित्याग गर्नुभयो । उहाँले नेपाली राष्ट्रियतामाथि संकट आउन नदिन राजा र प्रजातन्त्रवादी शक्तिबीच मेलमिलापको आवश्यकता देखाउनुभयो ।
त्यतिबेला परिस्थिति त्यस्तै थियो । अफगानिस्तानमा सोभियत संघले आधिपत्य जमाएको थियो । भारत बराबर खतरनाक अवस्थामा थियो । भारतीय सत्तामा इन्दिरा गान्धी थिइन् । उनी दह्रो नेता भए पनि सुरक्षाका बिम्बहरू धमिलिएका थिए । यही बेला बीपी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर देशभित्र आउनुभयो । सरकारले उहाँलाई गिरफ्तार गर्‍यो । उहाँ जेल जानुभयो । देशको शासनमा राजाका गोटी बनेका पञ्चहरूले बीपीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग गरे तर परिस्थिति बदलिँदै आयो ।
त्यो बेलासम्म राल्फाली समूह उत्तिकै जागरुक थियो । पछिल्लो समयमा जागरुकताको यो अवस्था रहेन । प्रगतिशील विचारतिर लहसिएको राल्फालाई प्रगतिशीलहरूले नै मान्यता दिएनन् । राल्फाहरू चकित परे । प्रभावशाली सांस्कृतिक समूहका रूपमा सर्वत्र मान्यता कमाउँदै गएको यो समूह बिस्तारै सेलाउँदै गयो । अहिले राल्फाको गीतबाहेक अरू सबै कुरा छिन्नभिन्न भइसकेको छ । राल्फाको गीतचाहिं अमर छ । यसले आगामी समयमा पनि नेपालीलाई जगाउने काम गर्नेछ । यसमा शंका छैन ।
बीपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको प्रमुख आशय देशको विकास थियो । राल्फाको आशय पनि फरक थिएन । तर देश अहिलेसम्म जहाँको तहीं छ । जनता गाउँ र बस्तीबाट उठ्न सकेका छैनन् । न त बीपीको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार समाजवादका बाटामै लागेका छन् । बीपीको निधनको दस वर्षपछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था प्रारम्भ भएको हो । पहिलो जनआन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राजाले दिएको मापदण्डको नारालाई चुनौती दिँदै आफ्नो हातमा शासन आए ‘सन् २००० सम्म नेपाललाई युरोपेली मापदण्डमा पुर्‍याउने’ आश्वासन दिनुहुन्थ्यो जनतालाई । उहाँले झन्डै दस वर्ष शासन गर्नुभयो तर देश कहीं पुगेन । उहाँले कतै पुर्‍याउन सक्नुभएन ।
हामी नेपाली सबै क्षेत्रमा पछाडि परेका छौं । केटाकेटीलाई सामान्य शिक्षा दिन असहज बनेको छ । कन्या शिक्षाको त्यही हालत छ । खास गरेर गाउँ र सहर दुवैतिरका छात्राहरू विचित्र त्रासमा डुबेका छन् । गाउँमा छाउपडी नबारे जातभात काटिने खतरा छ । सहरमा बलात्कार र हत्याका घटना सामान्य बनेका छन् । जनताका छोराछोरीलाई सामान्य प्राविधिक शिक्षाको समेत प्रबन्ध छैन । मेडिकल शिक्षा टाढाकै कुरा भयो । यी पंक्ति लेखिँदै गर्दा सबै नेपालीका छोराछोरीको मेडिकल पढ्न पाउने हक स्थापित गर्न एकजना डाक्टर अनशन बसेका छन् ।
अनशन जारी रहेकै अवस्थामा सरकारले चिकित्सा स्वास्थ्य विधेयक पारित गराएको छ संसद्बाट । लामो समयपछि सत्तामा आएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पहिले अनशनमा बसेका डाक्टरको माग पूरा गर्न राजी थियो । प्रधानमन्त्री आफैंले त्यसको जिम्मा लिएका थिए । अहिले सरकार डाक्टरका मागविरुद्ध उभिएको छ । यसैलाई राजनीति भन्नुपर्ने हो कि ? कसैले केही बुझेको छ जस्तो लाग्दैन ।
नेपालीजनतालाई जागरुक नबनाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिकक्षेत्रका विकृतिको निदान खोज्न सकिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा देश अघि बढेका बेला हामी नेपाली समृद्धिको बाटो तय गर्दै छौं भनेर कसरी भन्नु ? हो, सरकारले भन्दै आएको छ समुन्नत नेपाली, समृद्ध नेपाल । भनेर के हुन्छ ? हल्ला गरेकै भरमा नेपाली समृद्ध हुने होइन । मानिस दलदलमा भासिएका छन् । भुईंचालोमा घर भासिएका, लडेका जनतामध्ये अझै दस प्रतिशतले घर बनाउने सरकारी सुविधा लिन सकेका छैनन् । सामान्य भौतिक सुरक्षा र दालभातको समेत पत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा कसले भन्न सक्छ देशको विकास हुन्छ ? हो, विकासको परिकल्पना के हो ? केलाई विकास भन्ने र केलाई नभन्ने ? यसमा धेरै विषय पर्न सक्छन् । मूलभूत कुरा त फेरि पनि रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । यसबाट को रहन सक्छ अलग ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेका दिनदेखि अहिलेसम्म हल्ला खुब भएको छ । लोकतन्त्रमा हल्ला भएन भने समाज सुनसान हुन्छ । समाज सुनसान हुनुु राम्रो होइन । समाज सजग नभएको भए हामीलाई मेलम्चीको कुरा थाहा हुने थिएन । विगतको कुनै पनि सरकारका पालामा मेलम्ची यति माथिसम्म उक्लिएको थिएन विकास आयोजनाका रूपमा । सरकार औपचारिक हिसाबले मेलम्चीबाट पानी आउने दिन अनुमान गथ्र्यो । न लाग थियो न लपेट । काठमाडौंका जनताले आफ्नै जीवनको मुख्य आवश्यक तत्त्वबारे कहिल्यै सवाल–जवाफ गर्ने आवश्यकता देखेनन् । तर अहिले सरकार उत्तरदायी हुने बाध्यता खडा भएको छ ।
विकासका धेरै आयोजनाबारे हल्ला चर्किन थालेका छन् । कर्णालीमा जल–विद्युत् विकासको लाइसेन्स थामेर बसेको जीएमआरका विषयमा प्रश्न उठन थालेका छन् । जीएमआरले पैसा ल्याउने कि नल्याउने ? आयोजना बनाउने कि नबनाउने ? त्यस्तै प्रश्न तामाकोसी जल विद्युत्बारे छ । कसरी रातारात आयोजनाको मूल्य अकासियो ? कसरी यसको निर्माणको लक्ष्य पछि धकेलियो ? हो, शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू सामाजिक क्षेत्रका विकराल विकृतिहरूले आवाज पाएका छैनन् ।
नेपाली जनतालाई जागरुक अवस्थामा नल्याई यी समस्याको निदान खोज्न सकिँदैन । नाराको एउटा कालखण्ड सकिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस दुवैले यो बबन्डरलाई बुझेका छन् । राजनीतिलाई लिँडे गोरुको हैसियतबाट माथि उचाल्ने हो भने यसका उपलब्धिलाई समेट्नैपर्छ ।
अहिले त्यस्तो केही भएको छैन जसको उल्लेख मात्रैले जनता गौरवान्वित होऊन् । प्रधानमन्त्री ओली स्विट्जरल्यान्डको डावोसबाट भर्खरै फर्किएका छन् । अब उनले डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्यसँगै सरकारको बिग्रँदो स्वास्थ्यको कति हेक्का राख्नेछन् ? धेरै कुरा त्यसैमा निहित रहनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनमा समस्या समाधान निहित छैन, न त अर्को नेताको प्रवेशले समस्या समाधान हुनेछ । समाधानका लागि नीतिको प्रशोधन हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनको आधार दलको नीति हुनुपर्छ, मानिसको अवतार होइन ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०८:३०